Tsala Chain, Cable Carrier, Energy Chain - Anjie
MT series (Ukusuka 5mm * 5mm - 60mm * 300mm)
MTK series (Ukusuka 20mm * 30mm - 65mm * 300)
SK series (Ukusuka 25mm * 38mm - 45mm * 150mm)
VMTK series (Ukusuka 25mm * 30mm - 80mm * 300)
KJ series (10mm * 6mm & 10mm * 16mm)
VSK series (Ukusuka 18mm * 30mm - 45mm * 100mm)
Umgqomo series (Ukusuka 40mm * 50mm - 50mm * 100mm)
MTS series (Ukusuka 35mm * 50mm - 45mm * bungange 250)
iimeko ezigqubayo Series
Umbono wethu kunjalo ukusombulula iingxaki kubasebenzisi zethu kwaye gcina iindleko abaxumi bethu. Umgangatho kunye nkonzo ingqalelo yethu obungunaphakade.
Thina ingqalelo kwenkonzo. inkonzo Sales thethwano nasemva inkonzo yokuthengisa. Siceba ukubonelela ngexesha kwaye ulwazi oluchanekileyo ukuze bonke abaxumi okanye iindwendwe zethu.
Umgangatho wokuqala umbono wethu. Sibeka ukubaluleka phambi kulawulo lomgangatho. Kwangaxeshanye sizama kunzima kakhulu ukulawula ixabiso lethu ngaphakathi kwemida efanelekileyo.
Saba iminyaka engaphezu kwama-13 amava kwimveliso chain utsalo, isikhokelo kaloliwe zeenkomo inshorensi, wenayiloni kumbhobho zeenkomo incence kunye neemveliso ezinxulumeneyo.
inkampani Shijiazhuang Agile lusekiwe ukususela ngo-2008 Sina kwiminyaka engaphezu kwama-13 amava kwimveliso chain utsalo, isikhokelo kaloliwe zeenkomo inshorensi, wenayiloni kumbhobho zeenkomo incence kunye neemveliso ezinxulumeneyo. iimveliso zethu ingqalelo yokhuseleko USB, ukhuselo kaloliwe kwi eshukumayo Buyisela.
We got abasebenzi abali-100 kunye mveliso lethu ibekwe Yanshan okwilizwe kwiphondo Hebei, baza malunga kwindawo yemveliso 6500 square metres. ofisi yethu ibekwe e Shijiazhuang umzi, indawo malunga 300 square metres. Oku malunga neemitha Kilo 400 ukusuka eBeijing yendawo.
Ngenkxaso abathengi bethu baphesheya basemakhaya, kwaye iinzame iminyaka eli-13 ukugcina nokuphucula esemgangathweni kwemveliso kunye nenkonzo imveliso, siqala ngakumbi kwaye womelele ngakumbi ukuze ibe ubugcisa USB kanye guide kushishino nokhuselo kaloliwe.
ShanghaiTex 2019 exibition angabambeki 2019.11.25
Customer ebuza malunga yenethiwekhi intambo. Ukuxoxa lobukhulu kunye ye ...
100 leemitha kwimpuma isiphambuka phakathi 307 indlela kazwelonke abangabancedani kunye Tianshan street, ummandla ophezulu zobugcisa, Shijiazhuang.
Cnc Cable Rhuqa Chain , Electrical Cable Chain, Cable Rhuqa Chain , Plastic Cable Tsala Chain, Cable Wire Chain, Pregnancy Chain,